Zombie Computers And Botnet Malware - Semalt Expert Anopa Mhinduro Kana Vanga Vakanaka Kana Zvakaipa Pakombiyuta Yenyu
Kombiyuta ye zombie inoshandiswa kuInternet iyo inokanganisa nevanotya. Iyo inoshandiswa kune mamwe mabasa akaipa uye mabhota eZombies anoshandiswa kuparadzira spam kuburikidza ne emaimeri. Inotangawo kushora-kwe-kushungurudzwa - advantages of cat6 over cat5e. Vashandi vekombiyuta ye zombie havazivi kunyange kuti maitiro avo akanganiswa sezvo mapurogiramu aya anoshanda akanyarara uye achirwisa nhamba huru yefaira. Frank Abagnale, iyo Semalt Mutevedzeri weVatengi vanobudirira, anotaura kuti kurongedzwa kweDDoS kurwiswa nemabhodaneti kunofanana nekutengesa zombie, uye makombiyuta kana vashandi vakasiyana-siyana havazivi mabhodhi. A botnet malware ndeyekusanganiswa kwenhamba yakawanda ye-internet-yakashamwaridzana mafoni kana makombiyuta, imwe neimwe inotanga bot. Izvo zvinoshandiswa kuita zviratidzo zvakasiyana-siyana zvakarambidzwa-zve-kushungurudzwa, kubika deta, rega vatambudzi kuti vasvike pafoni yako, uye kutumira spam emails kana phishing links mune nhamba huru.
Haasi yose botnet malware uye zombie makombiyuta akaipa:
Unofanirwa kuyeuka kuti haisi mhando dzose dzinokuvadza uye dzakaipa. Semuenzaniso, mamwe makambani antivirusi anoenderera mberi achivandudza mazano avo nekubatsirwa kwebhokisi uye vashandi vanofanira kutevera mitemo nemirau yavo. Microsoft ichangobva kuvandudza mitemo yayo uye yakatanga uwandu hwemabhodaneti anoshandiswa nevashandi uye kudzivirira kutambudzwa kwezvinhu zvinokuvadza zvinokonzera. Nokudaro, kuisa mabhota aya pamakina ako haisi ngozi zvachose uye haufaniri kutorwa pasina..Botnets yakasikwa apo zvirongwa zvisina kunaka kana mavairasi akapinda nepachipu. Mutungamiri weBotnets anotungamirira zvimwe zvinhu kune maitiro akaiswa pamitambo yekutaurirana yakadai seHTTP neRC. Izvo zvipfeko zvinotorwa ne cyber kushamwaridzana nenzira dzakasiyana-siyana.
Nzira yekuchengetedzeka sei paIndaneti?
Unofanirwa kuisa chirongwa chinorwisa anti-malware kana chirongwa chinonzi antivirus chinofanira kuva chepakutanga uye chebhadhiro yepurogiramu kuti uwedzere kuchengetedza kwako paIndaneti. Kunze kwekudaro, haufaniri kumbomira pamisangano inoshusha uye kushambadzira kwekubwinya uyewo mazai epupupu haafaniri kuvhurwa sezvo angave ane bots mukati zhinji.
Mamirioni emabhiriyoni emaPC akave ane chirwere chinyararire nemabhanetsiti, achiita masimba makuru euto uye nekusimudzira kuba kana kuisa purogiramu yemunhu wese paIndaneti. Mamwe mabhati anosanganisira mabhodhoro emabhodaneti maduku uye makuru, akadai saConick, Zeus, Mariposa, BredoLab, uye ZeroAccess. Vose zvavo vanomirira mirairo kubva kuvashambadzi vasati vatanga kuita mabasa avo.
Vatungamiriri veBotnet vanowanzotengesa mabhizinesi epa botnet kune avo vanobhadhara zvakanyanya. Vashandi ndivo vanoita zvekutengesa mabhizimusi, mapato ezvematongerwo enyika, uye mapoka emakambani eIndaneti, ayo ose anotarisira kuparadza maitiro ekurwisa. Izvo zvinotyisa zvepa botnet ndeimwe chikamu chikuru chekuchengetedzwa kwenzvimbo yeInternet, uye botnets iri kumashure kwehuwandu hwehuwandu hwekupengesa. Nokudaro, kudzivirira kwavo kunotarisirwa, uye isu tinofanira kurega kuvharirwa ne keyloggers, utsotsi hwekuzivikanwa, uye kupesana kwehupenzi. Zombi zombiyuta makombiyuta uye botnet malware zvinogona kukuvadza zvigadzirwa zvako, saka unofanirwa kuchenjerera paunenge uchitsvaga mawebsite akasiyana.